भोलानथ पोखरेल उपाध्यक्ष निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन सरकारले घरघरमा सिंहदरवारको नारालाई अगाडी सार्यो । सोही अनुसारको सेवासुविधा घरदैलोमा उपलब्ध गराउनको लागि समयमा नै कर्मचारी समयोजन पहिलो शर्त थियो । यो संविधान कार्यन्वयनको पहिलो खुट्किलो पनि हो । तर ऐन...
अजय देवगनकी छोरी न्यासाको बलिउडमा डेब्यु गर्ने संकेत
लोकसंवाद संवाददाता, माघ ९, २०७५
बलिउड अभिनेता अजय देवगन र अभिनेत्री काजोलकी छोरी न्यासा बलिउडमा डेब्यु गर्ने संकेत मिलेको छ । तर, अजय देवगनले तत्काल छोरीले तत्काल बलिउड डेब्यु नगर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, अहिले न्यासा पढाइ गरिरहेकी छ । त्यसकारण अहिलेसम्म उसको बलिउडमा...
बोटमा सुन्तला पहेँलिन शुरु गरेदेखि यो साता करीब दुई दर्जन व्यवसायी पर्वतको मोदी गाउँपालिका२ देउपुरका दाताराम चापागाईंको घर पुगिसकेका छन् । सबैसँग मोलमोलाई गर्दागर्दै अन्त्यमा उहाँले पोखराका छत्र पुनलाई सुन्तला बेच्ने गर्ने निधो गर्नुभयो । सोही ठाउँकी कल्पना चापागाईंले पनि...
लोकसंवाद संवाददाता, माघ ७, २०७५
रोल्पा सदरमुकाम लिबाङबाट मिरुल टुटुका लागि छुटेको लु१ज ३३३२ नम्बरको यात्रुवाहक जिप दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार दुईको ज्यान गयो । केही दिनअघि सुलिचौरबाट सिर्प जुतुङखोलातर्फ जाँदै गरेको ग१ख ५५२१ नम्बरको बस दुर्घटनाग्रस्त भयो । सो दुर्घटनामा पनि दुईले ज्यान गुमाए...
घरमै बच्चा जन्माउँछन् सुदूरपश्चिमका एक तिहाइ महिला
जनचेतना नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक तिहाइभन्दा बढी महिलाले घरमै बच्चा जन्माउने गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज पाण्डेयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३४ प्रतिशत महिलाले घरमै बच्चा जन्माउने गरेका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउनुपर्छ भन्ने मानसिकता नहुँदा...
महिनावारी अनियमित छ ? यी उपाय अपनाउनुस्
लोकसंवाद संवाददाता, माघ ४, २०७५
महिनावारी अनियमित छ ? त्यसो हो भने चिन्ता नलिनुस् । यी घरेलु उपाय अपनाएर महिनावारी नियमित बनाउन सकिने चिकित्सकले बताएका छन् ।्मेवा खानुस् कार्यालयमा काम गर्ने महिलाहरू व्यस्त हुने भएकाले बाहिर खाना खाने गर्छन् । यस्तोमा प्रायःले जंक...
बेँसीसहरमा खरको छाना हटाउने अभियान
बेँसीसहर नगरपालिका११, चितीका नन्दनिधि पाण्डेको आधा उमेर खरको छानाको घरमै बित्यो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण जस्ताको छानो हाल्न नसक्नुभएका उहाँको सपना यसपालि पूरा भएको छ । बेँसीशहर नगरपालिकाको नगर क्षेत्रमा विपन्न तथा खरका छाना भएका घरमा जस्तापाता लगाउने अभियान...
चितवन अदालतमा एकतिहाइ मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका
जिल्ला अदालतमा दर्ता भएकामध्ये एक तिहाइभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका छन् । चालू आर्थिक वर्षको चालु आवको छ महीनामा परेका एक हजार चार सय ३८ मुद्दामध्ये पाँच सय ६ सम्बन्धविच्छेदका छन् । सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गराउनेमा महिलाको संख्या बढी छ ।...
पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका१ मा बँदेल आतंक बढेको छ । वडाका पथरहिया, सालबास, आनन्दनगर, सिमलटारी, बासाबसहीलगायत गाउँमा दिनहुँ बँदेलले आक्रमण गर्न थालेको छ । नजिकैको जंगलबाट आएका बँदेलले अहिलेसम्म चार जनालाई घाइते बनाइसकेको छ । बर्दघाट सवडिभिजन वन कार्यालयका रेञ्जर...
सावधान ! चिसोमा सिजनल डिप्रेसनले सताउँला
चिसो मौसममा दिन छोटो हुन्छ । जसका कारण मानिसले कम समय मात्रै घाम ताप्न पाउँछ । जसका कारण सिजनल अफेक्टिभ डिसअर्डर (एसएडी) को जोखिम हुन्छ । चिकित्सकका अनुसार घाम मानिसलाई चाहिने अत्यावश्यक तत्व हो । यसले शरीरको हाइपोथेलेमसलाई उत्तेजित गर्छ...
फेरिँदै डोल्पालीको जीवन
लोकसंवाद संवाददाता, माघ ३, २०७५
डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै यहाँका जनताको जीवनशैली फेरिन थालेको छ । गत असोज १६ गते जाजरकोटडोल्पा सडकखण्ड निर्माण सम्पन्न भएसँगै डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको हो ।सडक खुलेसँगै जीप, ट्याक्टर, मोटरसाइकल लगायतका यातायातका साधन भित्रिन थालेका छन् । जसका...